Last Fool Show (2019) | MM Movie Store
ဖိလဈပိုငျကားတှေ ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ ကွိုကျမယျ့ဇာတျလမျလေးပါ။အခဈြဇာတျလမျးတှဆေို ဖိလဈပိုငျတှကေ နငျ့နငျ့နဲနဲ ခံစားရအောငျ ရိုကျတတျကွပါတယျ။ဖွဈဖူးကွမလား မသိဘူး?????ကိုယျတှဇေ့ာတျလမျးကို ကိုယျတိုငျဇာတျလမျးဖနျတီးရမယျ့ အဖွဈအပကျြမြိုး။
ဒီဇာတျလမျးက ဇာတျကောငျကတော့ ဒီအဖွဈအပကျြနဲ့ ကွုံခဲ့ရတဲ့အကွောငျးပါ။ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဒီလိုပါ။အမြိုးသမီးဒါရိုကျတာ မီရေးဆာဟာ ထိတျလနျ့စရာဇာတျကားတှေ၊
လူထုကို မီးမောငျးထိုးပွတဲ့ ဇာတျလမျးတိုတှေ ရိုကျပွီးရုပျရှငျဆိုငျရာ ဆုမြားစှာကို ရရှိခဲ့ဖူးသူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
သူမ အလုပျဝငျမယျ့ဂလကျစီရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက လကျရညျစမျးတဲ့အနနေဲ့ သူမကို ရိုမနျ့ဈ ဟာသဇာတျလမျးတဈပုဒျကို ရိုကျစခေငျြတယျ။ရိုကျနကြေ ဇာတျလမျးတှနေဲ့ လုံးလုံးကှဲထှကျနတေဲ့ရိုမနျ့ဈဟာသ ရုပျရှငျ ရိုကျရတော့မယျဆိုတော့ဇာတျညှနျးရေးဖို့ ဒါရိုကျတာမမ ခေါငျးစားရတော့တာပေါ့။
ဖိလစ်ပိုင်ကားတွေ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ကြိုက်မယ့်ဇာတ်လမ်လေးပါ။အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဆို ဖိလစ်ပိုင်တွေက နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားရအောင် ရိုက်တတ်ကြပါတယ်။ဖြစ်ဖူးကြမလား မသိဘူး?????ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ဇာတ်လမ်းဖန်တီးရမယ့် အဖြစ်အပျက်မျိုး။
ဒီဇာတ်လမ်းက ဇာတ်ကောင်ကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒီလိုပါ။အမျိုးသမီးဒါရိုက်တာ မီရေးဆာဟာ ထိတ်လန့်စရာဇာတ်ကားတွေ၊
လူထုကို မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုတွေ ရိုက်ပြီးရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ ဆုများစွာကို ရရှိခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
သူမ အလုပ်ဝင်မယ့်ဂလက်စီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက လက်ရည်စမ်းတဲ့အနေနဲ့ သူမကို ရိုမန့်စ် ဟာသဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ရိုက်စေချင်တယ်။ရိုက်နေကျ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ လုံးလုံးကွဲထွက်နေတဲ့ရိုမန့်စ်ဟာသ ရုပ်ရှင် ရိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဇာတ်ညွှန်းရေးဖို့ ဒါရိုက်တာမမ ခေါင်းစားရတော့တာပေါ့။